Febraayo | 2008 | WEEJIDOW
Archive for Febraayo, 2008
War Deg Deg ah: Dacwada guddoomiyeha oo dib loo dhigay.
Febraayo 29, 2008
Dacwada guddoomiyihii hore ee Maxkamada sare yusuf Cali Haaruun iyo xubno kale oo maanta lagu waday inay ka furanto magaalada Baydhabo ayaa dib u dhac uu ku yimid.
Guddoomiyeha maxkamada gobolka Bay sheikh C/laahi Xaaji Maxamed ayaa waxa uu sheegay in dib loo dhigay dacwada guddoomiyihii hore ee maxkamada sare iyo garsoore Maxamed Nuur sheegow.
Sababta loo baajiyay dacwada ayaa la sheegay inay ku soo beegantay maalin jimce ah.
Waxa la isku afgartay in dawacdu dhacdo maalinta axada ee soo socota.
Magaalada Baydhabo waxa gaaray garyaqaanadii u doodayay yusuf Cali haaruun iyo garsoore sheegow waxana l;a filayaa in ay tagaan Baydhabo dhinaca dacwada ku soo oogay.
In badan hal bil ayay mas’uuliyiintaasi ku jira xabsiga Magaalada Baydhabo iyadoo laga wareejiyay caasimada Magaalada muqdisho oo muddo ay ku xirnaayeen.
War Deg Deg ah: Duqeyn Hoobiyeyaal ah oo duhurnimadii maanta lagu qaaday Fariisinka Ciidamada Ethiopia ee Wasaaradii Gaashaandhiga
Duqeyn Hoobiyeyaal ah ayaa lagu qaaday duhurnimadii maanta Xarunta Ciidamada Ethiopia ku leeyihiin Jidka Warshadaha, gaar ahaan Wasaaradii hore ee Gaashaandhiga.
Ilaa 6 Madaafiicda Hoobiyaha loo yaqaan ayaa lala dhacay Gudaha Wasaaradadii Gaashaandhiga, waxaanan la ogeyn qasaaraha ay geysteen, iyadoona Ciidamada Ethiopia ku jawaabeen Madaafiic kale.
Kooxaha Kacdoonada wada ayaa la sheegay in Hoobiyayaasha ay ku bartilmaameedsadeen Xarunta Wasaarada Gaashaandhiga oo Ciidamada Ethiopianku degan yihiin.
Ma cada qasaaraha ka dhashay Madaafiicda lagu weeraray Ethiopianka iyo jawaabaha ay ka bixiyeen, waxaase uu argagax ballaaran uu ku yimid dadka deegaanka kuwaasoo bilaabay in ay ka cararaan.
Ma ahan markii u horeysay ee sidan oo kale Hoobiyeyaal lagu weeraro Xarumaha Ciidamada Ethiopia ku leeyihiin Muqdisho, waxaana Magaalada caadi ka noqotay weerarada lagu qaado Ciidamada Ethiopianka ee Kooxaha kacdoonku ka soo horjeedaan joogitaankooda.
Maleeshiyo gadoodsan oo gacanta ku dhigay Degmada Raage Ceelle, kadib dagaal Ciidamadii G/Sh/Dhexe deegaankaas looga soo saaray
Maleeshiyo horay uga gadooday Maamulka G/Sh/Dhexe ayaa la wareegay gacan ku heynta Degmada Raage Ceelle, kadib dagaal ay xalay Ciidamadii Maamulka deegaankaa ay kaga saareen Deegaanka.
Ciidamadan iyo labo gawaari dagaal ayaa horay uga gadooday maamulka, iyadoona xalayna ay Ciidamada Maamulka Deegaankana ay weerar ku soo qaadeen.
Iska hor imaad socday qadar 30 daqiiqo ayay maleeshiyadaas gadoodsan kula wareegeen Deegaanka, waxayna qabsadeen Gudoomiyihii Degmadaas Xasan Xuseen Gar Cadde, kaasoo markii dambe ay sii daayeen.
Ilaa hal ruux ayaa ku dhintay iska hor imaadkaas, iyadoona 7 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana wali kacsan xaalada deegaanka Raage Ceelle oo dhinaca bari kaga beegan magaalada Jowhar.
Maleeshiyada gadoodka ah ayaa la sheegay in ay soo ceyriyeen Kooxo taabacsan Maxkamadaha oo ku sugan Deegaanada Gobolka, waxaana laga soo reebtay gaadiidkii iyo qoryihii ay kala baxsadeen maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe.
Xuseen Dheere “Ciidamo aan u dhalan Deegaanka ayuu Deelle u diray Raage Ceelle, kuwaasoo dhibaato iyo xasuuq ka waday deegaankaas”.
Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe Xuseen Dheere ayaa ku eedeeyay Gudoomiyaha Gobolka in Ciidamo uu ka uruuriyay Deegaanada Gobolka uu u diray Deegaanka Raage Ceelle.
Xuseen Dheere oo ku sugan Magaalada Muqdisho, isla markaana ka soo jeeda Deegaanka Raage Ceelle oo xalay dagaalo ka dhaceen ayaa sheegay in Ciidamo beeleedka uu Maxamed Cumar Deelle u diray Deegaanka Raage Ceelle ay ka wadeen dhibaatooyin isugu jira xasuuq iyo barakicin.
Waxa uu sheegay in Ciidamada Deegaanka ay gacanta ku hayaan, isla markaana ay u dul qaadan waayeen dhibaatooyinka ay wadeen Ciidamada deegaanka aan u dhalan sida uu yiri
“Ciidamo aan u dhalan Deegaanka ayuu Deelle u diray Raage Ceelle, kuwaasoo dhibaato iyo xasuuq ka waday deegaankaas”ayuu yiri Xuseen Dheere oo khilaaf xoogan u dhaxeeya isaga iyo Gudoomiyaha Gobolka Maxamed Cumar Deelle.
Ciidamo gadoodsan ayaa xalay weerar ay ku qaadeen Deegaanka Raage Ceelle waxay kala wareegeen Ciidamada Maamulka deegaankaas, waxaana Ciidamada halkaas qabsaday ku heyb yihiin Xuseen Dheere.
Khilaaf siyaasadeedka ka dhex taagan Gudoomiyaha Gobolka Deelle iyo Kuxigeenkiisa 1aad Xuseen Dheere ayyaa soo jiitamayay tan iyo bilowgii bishii december, waxaana khilaafkaas uu sababay in Xuseen Dheere uu isaga soo baxo Magaalada Jowhar, kadib dagaal Maleeshiyadiisa lagaga itaal roonaaday.
War Deg Deg ah: Ciidamada Dowlada oo Maanta dhac u geeystay Madbacada Beder ee ku taal Suuqa Bakaaro
Ciidamda Dowlada KMG ee Soomaaliya ayaa waxaa ay maanta dhac u geeysteen sida la sheegay Madbacada Beder oo lagu barto Cilmiga Diinta Islaamka kuna taala inta u dhexeeysay Wadooyinka H/wadaag iyo Aadan Cadde oo kaabiga Ku heeysa Suuqa Bakaaraha Ee magaalada Muqdisho.
Ciidamadani dhaca u geeystay Madbcada Beder ayaa la sheegay in ay ka Yimadeen isgooyska Aadan Cadde ayna ku libisnaayeen Dareyska Ciidamada Madaxtooyada ee Koofiyo Casta sida uu idaacada Waajidpress, VOA, BBC iyo Shabeelle u sheegay mid ka mida shaqaalaha Madbacada Beder oo xiliga ay ciidamada soo galeeyn ku sugnaa.
Ninkasi oo magaciisa ka gaabsaday ayaa intaa raaciyay in ay ka qaateen madbacada Boorso taalay Qeybta Baqaarka ee madbacada taasi oo uusan ka war heeyn waxa ku jiray waxaana ay jabiyeen dhamaan albaabada Gudaha ee Madbacadaasi ayuu intaa raaciyay.
Ninkasi ayaa waxaa uu sheegay in uusan soo koobi karin qasaaraha dhabta ah ee ay u geeysteen madbacada Ciidamadaasi maadaama ay maanta Jimce tahay isla markaana ay wada maqan yihiin inti badneeyd ee shaqaalaha madbacada.
Ciidamada dowlada ayaa waxaa ay saaka waabarigii isku soo fidiyeen dhamaan agagaaraha Shirkadaha isgaasiinta kuwaasi oo aan si dhab ah loo ogeeyn wax uu salka ku hayay soo faafidooda waxaana rasas kala hor yimid Xoogag ka soo hor jeeda iyadoo aan la ogeeyn Waxa qasaar ah oo ka dhashay iska hor imaadkaasi.
Dowladaha Mareykanka iyo Ethiopia oo kawada hadlay dhibaatada la taagan Wadanka Somalia
Dowlada Mareykanka iyo Dowlada Ethiopia ayaa kawada hadleen Xaaldaa Dalka Somalia uu marayo kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Adiss Ababa ee dalka Ethiopia.
Shir ay Dowlada Mareeykanka ugu tala gashay in dowlad Ethiopia ay kala hadasho arimaha Somalia oo uu hogaaminayay Generalka ugu Sareeya ee hogaaminaya Ciidamada Africom ayaa waxaa uu ka dhacay xarunta Dalka Ethiopia ee Adiss Ababa iyadoo Kulankaasi ay qeyb ka ahaayeen Madaxda Barnaamijka la yiraah CAPSTONE todobaadkii la soo dhaafay soo gaba gaboobay ayaa waxaa ay iskula soo qaadeen kulankaasi Xaalada Dalka Somalia iyo Joogitaanka Dalka Somalia ee Ciidamada Ethiopia.
Gudigan Shirka yeeshay ayaa sidoo kale la filayaa in ay u kicitimaan Dalka Jabuuti waxaana ay kala hadli doonaan Xaalad Mustaqbalka Dhaw ee Dalka Somalia.
Wada hadalka Labada dhinac ee Ethiopia iyo mareeykanka ayaa waxaa kaqeeyb galay Saraakiil Sar sare oo ethiopian ah sida laga soo xigtay War Saxaafadeed ay goor dhow soo saartay Safaarada Mareeykanka ee magaalada Adiss abab iyadoo in kulankasi uu ka qeeyb galay wasiirka Gashaandhiga dalka Ethiopia Kuma Demeksa iyo Generaal Samora Yunus oo ah mid ka mida madaxda Wasaarada Gaashaandhiga wadanka Ethiopia iyo Tekeda Alemu oo ka mid ah Madaxda wasaarada Arimaha Dibada Wadanka Ethiopia waxaana ay kala hadleen masuuliyiinta Mareeykana sidii dib loogu eegi lahaa xaalada Dalka Somalia oo ay wax ka qaban waayeen Ciidamo Fara badan oo ku sugan gudaha Somalia.
Sida laga Soo Xigtay Website ay isticmaalaan Midoowga Afica iyo Website uu leeyahay Ciidamada Mareeykanka ee la yiraah Africom ayaa lagu sheegay in iminka la Doonayo in la Xaaladaha Dalka Somalia dib loo eego isla markaan uu mareykanka uu xaaladaha Dalka Somalia ka taagan uu wax badan ka ogaado lana Taageero Dib u heesiin dhex marta garabyada isku haya Siyaasada Dalka Somalia.
Sarkaal ka tirsan Ciidamada Mareykanka oo magaciisa qariyay ayaa waxaa uu sheegay in kulankaasi uu ku saabsanaa Sidii loo Wajihi lahaa Xaalada ka Taagan Dalka Somalia oo in mudo ah ay shacbkiisa la daala dhacayeen dhibaatooyin fara badan isla markaana ay kumaan kun ku bara keceen gudaha iyo Dibada Dalka Somalia oo ay dhibaato ku heyso,Waxaana uu sarkaalkaasi Xusay in kulankasi ay la qaateen Dowlada Ethiopia uu ku soo dhamaaday jawi is afgarad wanaagsan.
Dowlada Ethiopia oo beesha Caalmka ugu baaqday in ay dowr muhiim ah ka ciyaarto Xalinta Qilaafaadka.
Dowlada Ethiopia ayaa beesha Caalamka ka codsatay in ay doowr muhiim ah ka qaadato mishaakilka Ka taagan Dalka Somalia xili Ciidamadeeda lagu eedeeyo in ay qeeyb ka yihiin dhibaatada ka taagan dalka Somalia.
Wasaarada Arimaha Dibada Ee Dalka Ethiopia ayaa ugu baaqday beesha caalamka in ay si dhab ah uga qeyb qaadato dedaalada lagu doonayo xal ka gaarida mishaakilka hareeyay Dalka Somalia.
warbixin ay soo saartay wasaarada Arimaha Dibada wadanka Ethiopia ayaa waxaa lagu sheegay in ay muhiim tahay in beesha caalamka ay ka qeyb qaadato dedaalada lagu doonayo wax u qabashada kumaanka kun ee somalida ah ee ku bara kacay gudaha dalka Somalia sababo amaankooda aawadeed.
Wasaarada Arimaha Dibada Dalka Ethiopia ayaa sheegtay in dowlada Ethiopia oo taageero xoogan u fidisa dowlada Somalia ee uu madaxweeynaha ka yahay C/llaahi Yuusuf ay dalka Ku soo dabaashay amaan buuxa iyo Xasilooni.
Waxaa sidoo kale wasaarada Arimaha Dibada wadanka Ethiopia ay sheegtay in dowlada Ethiopia ay ka shaqeeysay in dalka Somalia doorashooyin Dimuquraadi ah oo si xur ah u dhaca.
Hadalka wasaarada Arimaha Dibada wadanka Ethiopia ayaa ka danbeeyay kadib markii wasiirka Arimaha Dibada Dalka Ethiopia siuyun Misfin uu socdaal ku yimid magaala madaxda soomaaliya ee Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay kadibna uu kulamo ay irdaha u xirnaayeen kula qaatay 3 da masuul ee ugu sareeysa Dowlada Somalia.
Masuuliyiin ka tirsan dowlada Somalia ayaa sheegay in madaxda dowlad iyo Wasiirka Arimaha dibada Dalka Ethiopia ay ka wada hadleen xaalada Dalka Somalia iyo sidii loo sii anba Qaadi lahaa dib u hishiisinta.
War Deg Deg ah: Kooxda Al-Shabaab oo sheegtay inay weerari doonto gurigii Diish saran oo Muqdisho ku yaala
Febraayo 28, 2008
Kooxda Al-shabaab ayaa waxay ka digeen daawashada TV-yada ku xiran Settilite-yada ee Dish-ka loo yaqaan oo ay isticmaalaan qoysaska ku dhaqan Magaalada Muqdisho iyagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii lagu arko gurigooda saxankaas oo saaran.
Qoraallo ay ku dhajiyeen qaar ka mid ah darbiyada Degmooyinka Gobolka Banaadir, ayaa waxaa ku qornaa in Dishash-ka laga daawado TV-yada kala duwan ee caalamka cidii gurigeeda lagu arko lagu weerari doono bambooyin iyo bastoolado, iyagoo ku sheegay qoraalladooda inay toogan doonaan ugu dambeyn mas’uulka gurigaas.
“Waxaan uga digaynaa qoysaska ku dhaqan magaalada Muqdisho inay daawadaan TV-yada, waxaana lagu amrayaa inay dajiyaan saxammada ku xiran Sittilite-yada ee guryahooda dusha ka saaran; kuwaasoo ay ka daawadaan TV-yada; ciddii amarkaan u hoggaansami weydana waxaa lagu wargelinayaa in lagu weerari doono bambooyin iyo bastoolado” ayaa lagu yiri qoraalladaan oo inta badan ka muuqday dhismayaasha ku yaalla laamiyada Muqdisho, gaar ahaan goobaha ay dadku ku badan yihiin.
Kooxda Al-shabaab ayaa waxay sheegeen in TV-yadu ay qayb ka yihiin Shineemooyinkii ay horay u joojiyeen daariddooda, lagana daawado filimaan anshaxa aan ku wanaagsanayn iyo ciyaaraha kala duwan ee Isboortiga.
Arrintaan ayaa waxay dood-weyn dhexdhigtay maanta dadka ku dhaqan Magaalada Muqdisho; iyadoo dadka qaarkood ay ku gacan-sayrayaan go’aankaan cusub, halka dadka qaarkiisna ay sheegayaan inay tahay in la raaco, haddii kale ay dhibaatooyin lagala kulmi karo kooxda amarkaan soo jeedisay.
Dadka ay la kulantay GO ayna wax ka weydiisay sida ay amarkaan u arkaan ayaa waxay u bateen inaysan u hoggaansamayn, ayna sheegeen inay dagaal la geli doonaan kooxda Al-shabaab, haddii ay guryahooda kusoo weeraraan.
Kooxdaan oo ah mid dagaal hubeysan kala horjeeda DF ayaa waxay horay u xireen shineemooyinkii Muqdisho; iyadoo qaar ka ka mid ah shineemooyinka Muqdisho oo lagu weeraray bambooyin iyo rasaas ay kalifeen inay dad ku dhintaan kuwo kalena ku dhaawacmaan.
Ciidamo Ethiopian ah oo Caawa gaaray Maagalada Caabud Waaq ee Gobolka gal gaduud.
Ciidamo Ethiopian ah oo wata 5 gawaari oo kuwa dagaalka ayaa caawa waxa ay soo gaareen degmada Caabud Waaq ee Gobolka gal gaduud.
Dad goob joogayaal ah ayaa waxa y ku waramayaan in Ciidamada ay galeen Saldhiga degmada caabud waaq ee gobolka gal gaduud,waxaan la sheegayaan in ciidamada ay isku milmeyn ciidamada Nabad galyada oo halakaasi ku sugnaa,islamarkaana Ciidamada Ethiopianka ah ay dalbadeen in lala kulan siiyo qolayaha amniga.
Dadka ku dhaqan degmada Caabud Waaq ee Gobolka gal gaduud ayaa xiligaan waxa ay hadal haayaan xiligaan ciidamada Ethiopia ee halkaasi soo galay.
Dadka goob joogayaal ah ayaa sheegaya in ciidamada Ethiopia ay ka yimaadeen dhinaca iyo Maamulk Somalida Ethiopia ee sooh dinta la leh gobolka gal gaduud.
Dhawaan ayey aheed markii magaalada dhuusa mareeb ee xarunta gobolka gal gaduud ay ka soo ruuqaan sadeen Ciidamo Eythiopian ah fariisin ka sameysatay maalmo ku sugnaa waloo markii dambe ay isaga tageen goobtaasi..
Ciidamada Ethiopia ee Caawa soo galay degmada Caabud waaq ayaa waxa ay kulan la qaateen Maamulka degmada Caabud Waaq iyo taliyaasha Ciidamada madaniga ee Gobolka gal gaduud.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Febraayo, 2008.